इन्स्टाग्राममा तस्विरलाई सजिलै र चाँडै अर्काइभ गर्ने तरिका सिक्नुहोस्
के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ? कसरी इन्स्टाग्राममा फोटो अर्काइभ गर्ने? विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा फोटो संग्रह गर्न प्रेरित गर्न सक्छ। पहिलोमा उनीहरूलाई अनुप्रयोगमा बचत गर्नुपर्दछ, र यसरी जब तपाईं चाहनुहुन्छ तिनीहरूलाई हेराई गर्न सक्षम हुनुहोस्।
यद्यपि तपाइँ पछुताउन सक्नुहुन्छ र तपाईं तिनीहरूलाई फेरि अभिलेख राख्न चाहनुहुन्छ। समस्या खडा हुन्छ जब तपाईंलाई यो पुन: प्राप्ति गर्ने कुरा थाहा हुँदैन।
चिन्ता नलिनुहोस्! भाग्यवस, यो अनुप्रयोगको सम्भावना समावेश गर्दछ अभिलेख राख्नुहोस् र आफ्नो फोटोहरु अभिलेख राख्नुहोस्, तिनीहरूलाई हटाउनुको सट्टा। याद गर्नुहोस् कि यदि तपाईंले एक पोष्ट मेटाउनुहुन्छ भने, तपाईं मनपराउनुहुने टिप्पणी र टिप्पणीबाट वञ्चित हुनुहुनेछ, किनकि यी पनि मेटिएका छन्।
आउनुहोस्! म तपाइँलाई मेरो साथ जान को लागी आमन्त्रित गर्दछु कसरी तपाइँको इंस्टाग्राम फोटोहरू अभिलेखमा राख्ने असुविधा बिना।
अभिलेख र अभिलेख राख्ने इन्स्टाग्राम फोटोहरूलाई किन विकल्प छ?
सुरुमा इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई अवसर प्रदान गरेन तपाईंको फोटो र भिडियोहरू संग्रह गर्नुहोस्। यो समस्या थियो यदि तपाईं फोटो मेटाउन चाहानु हुन्न, तर तपाईं यसलाई आफ्नो प्रोफाइलमा झुण्ड्याउन सक्नुहुन्न।
इन्स्टाग्राममा धेरै घाटा भयो, रकमको कारण प्रयोगकर्ताहरू जसले फोटोहरू हटाए र बिस्तारै तिनीहरूले सेवा प्रयोग गर्न छाडे। अभिलेख विकल्पको विचार भनेको तपाइँसँग छविहरू बचत गर्ने अवसर छ। इरादा र चाहना हो कि फोटो अब सबैको लागि उपलब्ध छैन, तर तपाईंको लागि।
पहिले, तपाईंको फोटोहरूको गन्तव्य विकल्पहरूले क्रसरोडमा पु led्यायो जुन फोटो राख्ने वा मेटाउने परिणाममा भयो। त्यसकारण, अनुप्रयोगलाई यो सहित यो प्रकार्य सुधार गर्न आवश्यक पर्‍यो अभिलेख विकल्प।
फोटो संग्रह गर्दा, यदि तपाईं आफ्नो मन परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईं भविष्यमा पुनः प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तिम्रो लागि अनुयायीहरू केहि परिवर्तन हुँदैन जब सम्म तिनीहरूले फोटो हराएको महसुस गर्दैनन्।
अभिलेख गर्ने र अभिलेख राख्ने इन्स्टाग्राम फोटोहरूको कार्य के हो?
के तपाईं इंस्टाग्राममा राख्नुभएको कुनै फोटो वा भिडियोको लागि दु: खी हुनुहुन्छ, तर तपाईं यसलाई सँधैका लागि रद्द गर्न चाहनुहुन्न? अब तपाईं ती छविहरू अभिलेख गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं सक्षम हुनुका साथै अन्य सम्पर्कहरूलाई देखाउन रोक्न चाहानुहुन्छ तिनीहरूलाई पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् जब तपाईं चाहनुहुन्छ।
यो प्रकार्य महान छ, किनकि यदि तपाईं फोटो वा भिडियो स arch्ग्रह गर्नुहुन्छ भने, यो अब तपाईंको सम्पर्कहरूमा देखिने छैन। जे होस्, तपाईं यसलाई हेर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ र टिप्पणीहरू र मनपराउन सक्नुहुन्छ जुन यो उत्पन्न गरिएको छ। स्पष्ट रूपमा यदि तपाईं एक फोटो अभिलेख गर्नुहुन्छ तपाईं यसलाई अभिलेख राख्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं चाहनुहुन्छ.
किन यस्तो फोटो मेटाउने जुन भविष्यमा तपाईले फेरि देख्न चाहानुहुन्छ?
यो एकदम विडंबनापूर्ण छ कि यदि तपाईंसँग एक इन्स्टाग्राम खाता छ भने यो यो छ किनकि तपाईं अरूहरू हेर्नको लागि छविहरू अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं किन यसलाई देख्न दिन चाहनुहुन्छ? कारण धेरै हुन सक्छ।
हुनसक्छ यो पहिले नै अप्रचलित छ, वा किनभने यो राम्रो फोटो होइन र तपाईंलाई लाज लाग्छ, वा किनभने यो प्रकाशित गरेकोमा अफसोस भएको छ। वा केवल, किनभने फोटो तपाईंले अपेक्षित सफलतामा पुग्न सकेन। यद्यपि यसलाई हटाउने विचारले तपाईंलाई अलमल्याउन सक्छ, र तपाइँ यसलाई केही समयको लागि अभिलेख राख्न चाहानुहुन्छ।
केहि व्यक्तिले आफ्नो फोटोहरू पुरालेख गर्दछ अर्को प्रोफाइल दृश्य दिन, र यसलाई अधिक अद्यावधिक बनाउनुहोस्। तपाईको छवि देख्न रोक्नुको कारणको बावजुद, तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि यसलाई मेटाउन आवश्यक छैन, अभिलेख राख्नु पर्याप्त हुनेछ।
कसरी अभिलेख इन्स्टाग्राम फोटोहरू?
तपाईं ती चित्रहरू संग्रह गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले केही समय पहिले प्रकाशित गर्नुभयो र अब तपाईं आफ्ना अनुयायीहरूलाई देख्न चाहानु हुन्न। यसले तपाईंलाई अनुमति दिनेछ पछि अर्काइभ गर्नुहोस्, वा आवधिक रूपमा।
यदि तपाईंले एक फोटो फाइल गर्नुभयो र पता लाग्यो कि अब तपाईंलाई कसरी थाहा छैन यसलाई तपाईंको प्रोफाइलमा देखिने बनाउनुहोस्, म तिमीलाई भन्छु कि यो धेरै सरल छ।
म तपाईंलाई तलका चरणहरू अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्दछु ती छविहरू अभिलेख राख्नुहोस् तपाईंले आफ्नो इन्स्टाग्राम फाइलमा राख्नु भएको छ।
1 अनुप्रयोग खोल्नुहोस्
तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको इन्स्टाग्राम प्रतिमा थिचेर अनुप्रयोग खोल्नु हो। अर्को, तपाईंको प्रोफाइलमा जानुहोस्, र प्रकाशन अभिलेख सेक्सनमा जानुहोस्।
याद गर्नुहोस् कि केवल तपाईंले संग्रह गर्नु भएको पोष्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
2 इन्स्टाग्राम फाइलहरू सेक्सन प्रविष्ट गर्नुहोस्
फाईल सेक्सन प्रविष्ट गर्न र तपाईको तस्बिरलाई अभिलेखमा राख्नुहोस् तपाईंले एक आईकन थिच्नु पर्छ जुन घडी अनुकरण गर्दछ। यससँग गोलाकार एरो पछाडि सting्केत गर्दछ। यो तपाईंको उपकरणको स्क्रीनको माथिल्लो-दायाँ भागमा छ।
यो प्रतिमा थिचेर, तपाईं स्वतः प्रकाशन संग्रह सेक्सन प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो सेक्सनमा तपाईले दुई विकल्पहरू भेट्टाउनुहुनेछ, यी हुन्: कथाहरू अभिलेख र प्रकाशन संग्रह।
तपाईंले यसलाई राम्रोसँग प्रमाणित गर्नुपर्दछ, त्यसैले तपाईंलाई कहाँ प्रविष्ट गर्ने भनेर जान्नुपर्नेछ र अलमलमा नपर्नुहोस्। यस्तो तरिकाले कि, को समयमा तपाईं अभिलेख राख्न चाहानुभएको फोटो फेला पार्नुहोस् यो सजिलो हुनेछ। यो गर्नका लागि निम्न प्रमाणित गर्नुहोस्:
मा कहानी संग्रह तपाईंले इन्स्टाग्राम कथाहरूमा प्रकाशित सबै कथाहरू पाउनुहुनेछ। सम्झनुहोस् कि ती ती हुन् जुन २ 24 घण्टाको लागि उपलब्ध छन्। यो स्वत: बचत हुनेछ हरेक चोटि तपाईंले यो सेक्सनमा केहि अपलोड गर्नुभयो। तपाईंले तिनीहरूलाई बचत गर्नु आवश्यक पर्दैन।
मा प्रकाशन संग्रह तपाईंले ती छविहरू पाउनुहुनेछ जुन तपाईंले आफ्नै संग्रहमा निर्णय गर्नु भएको छ। ती छविहरू जुन तपाईले अभिलेख राख्नु भएको छ किनकी तिनीहरू तपाईँको खाताको हालको शैलीमा ठिक छैन।
3 प्रकाशन संग्रह सेक्सन प्रविष्ट गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले प्रकाशन संग्रह सेक्सनमा प्रवेश गरेपछि तपाईंले संग्रह गर्नु भएका छविहरू फेला पार्नुहुनेछ र छनौट गर्नुहोस् फोटो तपाई अभिलेख राख्न चाहानुहुन्छ। यो फोटो तपाई अभिलेख राख्न चाहानुहुन्छ एकल विन्डोमा खुल्नेछ।
माथिल्लो दायाँ तिर तपाईले ठाँउमा तीन पोइन्टहरू भेट्टाउनुहुनेछ, र ती तीन बिन्दुहरू थिच्नुहोस्। त्यहाँ2विकल्पहरूको साथ एउटा सानो विन्डो प्रदर्शित हुनेछ: "प्रोफाइलमा देखाउनुहोस्" र "हटाउनुहोस्"
4 तपाईंको तस्बिरलाई अभिलेखबाट निकाल्नुहोस्
चयन गर्नुहोस् प्रोफाइलमा विकल्प देखाउनुहोस् र यस तरीकाले तस्बिर फेरि उपलब्ध हुनेछ र तपाईंको सबै सम्पर्कहरूमा देखिने छ। साथै इन्स्टाग्राममा तस्विरको अभिलेख राख्नुहोस्!
5 तपाईंको प्रोफाइल जाँच गर्नुहोस्
अब तपाइँको प्रोफाइल मा जानुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि फोटो फेरि यसमा छ। यस्तो लाग्दैन कि यो पहिलो स्थितिमा देखा पर्नेछ जस्तो कि तपाईंले यस समयमा त्यसलाई उठाउनु भएको थियो। ऊ यो फाइल गर्नु अघि उनको स्वामित्वको स्थान लिने छ। मिति अनुसार तपाईंले यसलाई झुण्ड्याउनु भयो।
यो फोटो तपाईंको प्रोफाईलमा देखा पर्नेछ। तपाइँका अनुयायीहरूलाई कुनै सूचना पठाए बिना, यो चुपचापले गर्दछ, तपाईले यो कहिले लुकाउनुभयो।
अर्को कुरा परिवर्तन हुनेछ जुन त्यो हो फाइल काउन्टर। अधिक वा कम छविहरू देखा पर्दछ फोटोको संख्यामा निर्भर गर्दै तपाई अभिलेख राख्नुहुन्छ वा अर्काइभ गर्नुहोस्।
अभिलेख राख्न र तपाईंको इन्स्टाग्राम फोटोहरू संग्रहित गर्नका फाइदाहरू
तपाईं फोटोहरू प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ तपाइँ चाहानुहुन्छ सबै प्रयोगकर्ताहरूमा दृश्यात्मक हुनेछ।
तपाईंलाई अनुमति दिन्छ तपाईंको प्रोफाइल अपडेट राख्नुहोस्.
तपाईं ती सम्झनाहरु राख्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई हटाउन आवश्यक पर्दैन, यदि तपाईं यसलाई आफ्नो दृश्यमा पूर्ण दृश्यमा उपलब्ध हुन चाहनुहुन्न भने पनि
यो प्रकार्य यो जो मार्केटिंग को लागी एक खाता छ को लागी धेरै उपयोगी छ, किनकि तिनीहरूले पदोन्नति वा प्रस्तावहरूको छविहरू तिनीहरूलाई नहटाउन लुकाउन सक्दछन्।
कुनै पनि अभिलेख फोटो यो फेरि सजिलै देख्न सकिन्छ जब हामी यसको व्यवस्था गर्छौं यसलाई हटाए बिना, जुन अपरिवर्तनीय विकल्प हो।
यसले तपाईंलाई महत्वहीन फोटो पोस्ट गर्न अनुमति दिँदछ तपाईको समय अनुसार दृश्यात्मक, साथ साथै इन्स्टाग्राम कथाहरू। केवल समय 24 घण्टा भन्दा लामो हुन सक्छ।
यदि तपाइँ हाइलाइटहरू तपाइँको खातामा राख्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ अब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले अब यति धेरै पटक यसमा राखिएको कुरा हटाउनुपर्दैन। तपाईंले भर्खर मात्र संग्रह र यो अभिलेख राख्नु पर्छ जब तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ।
सिफारिशहरू जब संग्रह र तपाईंको इंस्टाग्राम फोटोहरू अभिलेखबाट निकाल्दै
सम्झनुहोस् अनुप्रयोग अपडेट राख्नुहोस् यसको पछिल्लो संस्करणमा।
तपाईको खाता जाँच गरी राख्नुहोस् इन्स्टाग्रामबाट आवधिक रूपमा। तपाईंले सायद छविहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन तपाईं संग्रह गर्न रुचाउनुहुन्छ।
तपाईंको प्रोफाइल अपडेट राख्नुहोस्। यो तपाईका अनुयायीहरूको संख्या, मनपर्ने र टिप्पणीहरूमा निर्भर गर्दछ।
यदि तपाईंको खाता मार्केटिंगसँग सम्बन्धित छ भने, अभिलेख र अभिलेख राख्ने फोटोहरू विचार गर्नुहोस्। विशेष गरी ती जो एक सेवा वा उत्पादन पदोन्नतीको साथ सम्बन्धित छ। उपयोगिता अनुसार उनीहरूले तपाईको ब्यापारको लागि प्रस्ताव गर्दछन्।
तपाईंले छविहरू मेटाउनु पर्दैन, यो सँधै पोष्ट मेटाउने भन्दा संग्रह गर्नु राम्रो हुन्छ।
हामी यस पोष्टको अन्तमा पुगेका छौं, जहाँ मैले तपाईंलाई प्रक्रिया को सुविधाका लागि मार्गहरू देखाउँदछु कसरी इन्स्टाग्राममा फोटो अर्काइभ गर्ने.
कुनै श doubt्का बिना, यो केहि मानिसहरूका लागि बोझो प्रक्रिया हुन सक्छ, तर यो सिक्न असम्भव छैन। याद गर्नुहोस्, यस अनुप्रयोगसँग अधिक र अधिक विकल्पहरू छन्, जसले यसको प्रयोग बनाउँछaबढ्दो सरल र सजिलो प्रक्रिया।
इन्स्टाग्रामले प्रदान गर्ने सुविधाहरूको फाइदा लिन निश्चित गर्नुहोस्, जुन बढि उपयोगी र अपडेट रहनुहोस्.